Maxaa Keena Cambaarta? | Hangool News
Maxaa Keena Cambaarta?
Hargeysa(Hangoolnews.com) Cambaarta waa infakshan maqaarka ku dhaca waxaana keena jeermiska fangaska, xanuunkaan waxuu u bilowdaa sida xasaasiyad oo kale. Caruurta yaryar ayaa ugu badan dadka ay ku dhacdo cambaartu.
Qeyb ka mid ah maqaarka oo guduudata ama casaan noqota isla markaana cuncun leh
Kululeyl iyo xanuunisku jira oo laga dareemo goobta casaatay
Dareen gubasho ah
Maqaarka oo biyo galaan
Inay meesha qolof yeelato
Finan kasoo baxa meesha waxyeelladu gaartay
Badanaa cambaarta waxaa sababo difaaca jirka oo si aan caadi ahayn uga jawaaba shay aan dhib weyn maqaarka u lahayn. Sidoo kale waxaa keeni kara, waxyaabaha la isku carfiyo oo qofka xasaasiyad ku keeni kara, kareemada qaar, jinyeerka saraawiisha ee taabanaya maqaarka, silisyada la gashado qoorta dhagaha iyo fargashiga.
Cambaartu ma lahan daawo rasmi ah, laakiin waa xaalad caafimaad oo la maarayn karo. Waa daruuri in la iska ilaaliyo waxyaabaha xasaasiyada maqaarka taasoo yarayn karta fursadda in uu xanuunkan ku dhici karo. Biyo diirran ayaa lagu dhaqaa meesha waxyeelladu gaadhay, waxaana la mariyaa boomaato khaas oo dhakhtar ku qoray si ay uu dayactiranto meesha maqaarka ee guduudatay. Haddii calaamaduhu ay yihiin kuwo qofku uu dhibsanayo waxaa lagu taliyaa inuu booqdo dhakhtar ku takhasusay maqaarka si ugala tashado xaaladaan.
Xigasho:- Daryeel Magazine